Federasiona Malagasin’ny Tenisy: hotanterahina ny 11 desambra ny fifidianana ny filoha | NewsMada
Federasiona Malagasin’ny Tenisy: hotanterahina ny 11 desambra ny fifidianana ny filoha
Araka ny tapaka, hatao ny asabotsy 11 desambra ho avy izao, eny amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina ny fifidianana izay ho filohan’ny federasiona malagasin’ny tenisy (FMT), ho an’ny taom-piasana efatra manaraka. Hatreto, tsy mbola misy mitonona ho kandidà ho amin’izany toerana izany. Efa nanambara ihany koa Rakotondrainibe Stephane, filoha am-perinasa fa tsy hirotsaka hofidina intsony, amin’ity.
Efa misokatra ny fisoratana anarana ny amin’izany, izay haharitra hatramin’ny 9 desambra, amin’ny 3 ora folakandro. Misy fitsipika kosa ny filatsahan-kofidina amin’ity toeran’ny filohan’ny federasiona malagasin’ny tenisy ity. Anisan’izany ny taonan’ny mpifaninana, izay mihoatra ny 21, amin’ny fotoana hanatontosana ny latsa-bato. Tsy mbola nisazy na voaheloka teo anatrehan’ny tribonaly ary tsy nahazo fanamarihana tsy fahafahana manatanteraka izany, avy amin’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena.
Tsy maintsy tontosa mialoha io fotoana io kosa ny an’ireo ligim-paritra rehetra. Raha tsiahivina, miisa 7 ireo ligim-paritra mandrafitra ny federasiona ary manan-jo handatsa-bato, dia Analamanga, Vakinankaratra, Atsinanana, Boeny, Matsiatra Ambony, Atsimo Andrefana, Amoron’i Mania.